puspa tamang – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
Author: puspa tamang
साेलुखुम्बुकाे फेरा केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव ७ रेक्टर स्केलकाे भूकम्प
April 16, 2020 April 16, 2020 puspa tamang
सोलुखुम्बु – साेलुखुम्बुकाे फेरा केन्द्रबिन्दु भएर मध्यरातमा भूकम्प गएकाे छ । फेरा केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हाे । गए राति १२ बजेर ५५ मिनेट जाँदा भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पका कारण क्षति भएकाे वा नभएकाे बारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।
ओखलढुंगाको चम्पादेबी गाउपालिकामा बोलेरो जिप दुर्घटना
February 3, 2020 February 3, 2020 puspa tamang
माघ २०, २०७६ सोमबार , ओखलढुंगाको चम्पादेबी गाउपालिकामा बोलेरो जिप दुर्घटना भएको छ । चम्पादेवी स्थित कालिकाबाट बिलन्दु जादै गरेको स १ च १४८९ नम्बरको बोलेरो जिप चम्पादेवी ५ पोखरे नजिक अल्छेढुंगा छेउमा दुर्घटना हुदाँ चम्पादेवी ८ बिलन्दुका ज्ञान बहादुर खत्री घाइते भएका छन । घटनाको खबर प्राप्त भए लगत्तै घटना स्थलमा प्रहरी चौकी कोषहाटबाट खटिएको प्रहरी र अन्य स्थानियले घाइतेको उद्दार गरेका थिए । घाइतेलाइ उद्दार गरि ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल मिसनमा उपचारका लागि ल्याइएको चम्पादेबी गाउपालिकाका अध्यक्ष नबराज के. सि. ले जानकारी दिनु भयो ।
‘एन्टी हिरो’ मा अनमोलसँग जसीता
काठमाडौं। चर्चित अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री जसीता गुरुङ अनमोल केसीको होम प्रोडक्सनको नयाँ फिल्म ‘एन्टी हिरो’मा जोडीको रुपमा देखिने पक्का भएको छ। बुधबार अभिनेता भुवन केसीले जसीतालाई अनुबन्धन गरेसँगै उनीहरूको जोडी पक्का भएको हो। एक्सन र लभस्टोरी जनरामा बन्ने यस फिल्मलाई नयाँ निर्देशकले निर्देशन गर्ने भएको छ।अनमोल र जसीतासँगै यस फिल्ममा भुवन केसीको पनि अभिनय रहने छ। बैशाख १ गतेबाट फिल्म फ्लोरमा जाने बताइएको छ।त्यो भन्दा अघि अनमोल अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापा निर्देशित फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ को सुटिङमा व्यस्त हुने छन्। उक्त फिल्मको छायाङ्कन आगामी फागुन…
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि भ्रष्ट प्रवृत्ति भने परिवर्तन गर्न नसकेको बताएका छन् । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि नेता गुरुङले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । शुक्रबार ट्वीटरमा लेख्दै गुरुङले अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने विधेयक पारित नगर्न सांसहरूलाई आग्रह गरेका छन् । गुरुङले भ्रष्टाचार झन बढ्दै गएको र जनताले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने गणतन्त्र नखोजेको पनि लेखेका छन् । ‘व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं तर भ्रष्ट प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सकेनौं । गणतान्त्रिक नेपाललाई झनै भ्रष्ट बनाउँदै त छैनौं ? ख्याल…
काठमाण्डाै – नेपाल एअरलाइन्सका २५ जना पाइलटले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । विदेशी र नेपाली पाइलटबीच सेवा सुविधामा चरम विभेद गरिएको भन्दै उनीहरुले तीन महिनाको समय दिएर व्यवस्थापनसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । व्यवस्थापनको काममा नेपाली स्थायी कर्मचारी बढी खटिनुपर्ने भए पनि बढी सेवा सुविधा विदेशी पाइलटलाई दिइएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले तीन महिनामा नेपाली पाइलटलाई तालिम दिएर सबै विदेशी पाइलट विस्थापन गर्ने वा नेपाली पाइलटले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेर सबैलाई करारमै काम चलाउन विकल्प दिएका छन् । तीन महिनाभित्र नेपाली र विदेशी पाइलटबीचको विभेद अन्त्य नगरे आफूहरु काममा नआउने भन्दै…
पोखरा – गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङ पोखराको लेकसाइडबाट पक्राउ पर्नुभएको छ । जिल्ला अदालत पोखराले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरी टोलीले सांसद मनाङ्गेलाई पक्राउ गरेको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङले बुधबार दुर्व्यवहार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएपछि उहाँ पक्राउ पर्नुभएकाे हाे । उहाँलाई पक्राउ गरेर म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । ‘ उहाँलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखिएको छ । अब उहाँलाई यही राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउछौँ, अहिले हामी छलफलमा क्रममा…
कास्की – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो विजयले वर्तमान सरकारलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरेर परिणाममुखी बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि बिहीबार साँझ पोखरामा आयोजना गरिएको विजयी सभामा उहाँले सरकार र सदनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी ‘समृृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सरकारको आकांक्षालाई सफल तुल्याउन आफ्नो विजयले सघाउने दाबाी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न र सरकारलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरेर परिणाममूखी बनाउन विजयले मद्दत गर्नेछ । हामी सरकारलाई हरहालतमा सफल बनाइ छाड्ने छौँ, म आफ्नातर्फबाट सम्पूर्णरूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ …